IDayz Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
Thola ukufinyelela kuma-hacks we-DayZ aholayo, lapha kuphela ku-Gamepron. Sinikela ngeDayZ Wallhack, i-Aimbot, i-ESP, iRadar, nezinye izinto eziningi ukugcina abasebenzisi bethu bekulungele ukufana nanoma ngubani.
Usuvele uthenge iHacker Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-hacks ethu eDayZ, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma lisasebenza ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu DayZ Hacks
IDayZ Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
Alpha likaHack yilelo elaligqokwe
Thenga DayZ Hacks in 4 izinyathelo
Khetha i-DayZ ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemidlalo ezitholakala lapha eGamepron
Khetha izici zokugenca ezilingana nezidingo zakho kangcono, akunamsebenzi wokuthi sikutholile okudingayo!
Thenga ukhiye wakho womkhiqizo usebenzisa iprosesa yethu yokukhokha ekhethekile (futhi ephephile), etholakala kuphela ku-Gamepron
Ngemuva kokuthenga ukhiye womkhiqizo ungafinyelela futhi ulande i-DayZ hack yakho!
Kungani ama-Gamepron DayZ hacks?
Vuselela i-1.13 ye-DayZ ibonise izinhlobo eziningi zezikhali ezintsha kepha akukho lutho futhi oluguqula umdlalo ngaphandle kokukhishwa kwemodi yomlilo eqhamuke eceleni kwesibhamu seM16. Umdlalo ubuye wethula omagazini abasha abengeziwe kanye nezinto ezintsha njengoketshezi.
I-DayZ isanda kuvuselelwa yaba yi-1.13, futhi isibuyekezo sengeze ezinye izici nezikhali emdlalweni. Mhlawumbe isengezo esiphawuleka kakhulu yileso se-M16A2 kanye nemodi yayo yomlilo eqhumayo. Isibuyekezo sengeze nokuhlukahluka okuhlukile kwe-machete ongakusebenzisa ukuqhubeka nokwenza ngcono ukubukeka kwakho.
Ngokukhishwa kwesibuyekezo 1.12 seDayZ, iBohemia Interactive ingeze uhla lwezikhali ezintsha, kufaka phakathi isikela, ummese we-fange, ummese we-kukri, nokuningi. Umdlalo manje usufaka amandla okususa phansi amabhomu agqitshwayo futhi ungaqala nokusebenzisa izindlu zokugcina izithombo ukutshala izitshalo nemifino.
IGamepron izoshintsha indlela odlala ngayo iDayZ, njengoba amathuluzi wethu ahola phambili embonini ukuphela kwento oyidingayo ukunqoba ukufana okuningi. Ukuba nempumelelo ethe xaxa kumdlalo onjengeDayZ kuvame ukuthatha isikhathi, ngoba kufanele wakhe izikhali nendawo yokuhlala lapho ungancintisana nabanye abantu. Ukuqoqa izinsizakusebenza nakho konke lokho okungenangqondo kuyingxenye enkulu yomdlalo, kepha nakanjani kuyisicefe - yingakho ungafuna ukusebenzisa ama-hacks ethu eDayZ, njengoba ungagwema "ukugaya okuyisidina" okuhambisana ukudlala. Izingxenye ezinhle zalo mdlalo kulapho ulwa khona nabanye abadlali abaneZombies ezikuzungezile, unikeza abadlali lelo rush adrenaline elenza imidlalo yevidiyo ibe mnandi kakhulu! Ngenkathi isimo ngokwaso sizwakala sithokozisa, kunzima ukudlula kulokho ngaphandle kosizo oluvela ekukhohliseni okulungile kwe-DayZ.
Noma ngabe uke wakhohlisa ku-DayZ phambilini noma ubheke ukukwenza okokuqala ngqa, i-Gamepron ingakunikeza ngakho konke ukuphamba okudingekayo ukuze uchume. Abanye abadlali bazobe becabanga ukuthi ukwazile kanjani ukunqoba yonke indawo yokwamukela izivakashi, futhi abanye babo bangaze bazame ukukungeza njengomngani! Ngezici ezifana ne-DayZ aimbot, i-wallhack, i-ESP, nezinye izinketho ongakhetha kuzo, ukungena kwethu ku-DayZ kuyisixazululo esinamandla kunazo zonke esitholakala kuwebhu.
Ama-Hacks athathwa njengama- “premium” akhishwa kaningi, kepha bambalwa kakhulu kubo abazophila ngokuvumelana nalelo zinga. Lonke ithuluzi elithengwa ku-Gamepron liqinisekisiwe ukuhlangabezana nezindinganiso zakho bese kuthi ezinye, njengoba sisebenza nabathuthukisi abahamba phambili kuphela. Ukuchitha imali ku-hack efanele ye-DayZ ngeke kukuvumele nje ukuthi uthokozele umdlalo kakhulu, kepha kuzosiza nje abadlali ukuthi banqobe ngokujwayelekile.
Ezokuphepha nazo zibaluleke kakhulu lapha eWinThat War, ngoba besingeke sifune ukuthi abasebenzisi bethu bavinjelwe ngenkathi begenca ngamathuluzi weGamepron. I-hack yethu ye-DayZ iza nokuvikeleka kwezinga eliphezulu, okuvumela abadlali ukuthi bangene ngaphandle kokukhathazeka - akekho ovinjelwa lapho bekopela besebenzisa i-Gamepron! Uma une-akhawunti endala noma ukhathele nje ukubhekana nokuvinjelwa, i-hack yethu ye-DayZ kuphela ezoba nokuphepha okwanele ukukunika ukuthula kwengqondo. Uma konke lokhu kuzwakala njengokuthile ongakujwayela, thola ukufinyelela namuhla! Thenga ukhiye womkhiqizo we-DayZ hack yethu futhi uzizwele umehluko.
IDayZ Wall Hack (ESP)
Imininingwane yeDayZ Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
I-DayZ Into ESP enezihlungi
Izexwayiso zesitha seDayZ
Imodi ye-DayZ super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza).
DayZ bone & aim ukhiye okulungisekayo.
Isinxephezelo seDayZ Reoil
OurDayZ Hack Izici
IDayZ Player ESP
I-DayZ Player ESP yethu ilungele ukugcina ithrekhi yezitha zakho. Zibone ngezindawo eziqinile nezikhanyayo ngokusebenzisa i-ESP (i-Extra Sensory Perception).
Imininingwane Yesidlali inketho ezokuvumela ukuthi ufunde kabanzi mayelana nethagethi yakho. Bona ukuthi amagama abo, ezempilo, ngisho amabanga asebenzisa kanjani ukugqekezwa kweDayZ.
Into i-ESP ilungele labo abangathandi ukuchitha isikhathi, njengoba singekho isidingo sokubheka izakhiwo ukuze ziphangwe.
IDayZ Aimbot yethu ifakwe kuphela izici ezinamandla kakhulu ezungeze. Yenza noma yini ongathanda ukuyifaka ku-DayZ ngokusebenzisa ukukopela kwethu kwe-DayZ!
Ithrekhi ye-DayZ Bullet (esebenza ngamabanga amafushane naphakathi nendawo)
DayZ bone & aim ukhiye okulungisekayo
Lungiselela i-DayZ Aimbot usebenzisa ithambo lethu futhi sihlose izinketho zokhiye ongazilungisa, unikeze abasebenzisi bethu ithuba lokwenza ngokwezifiso ama-hacks abo.
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-DayZ aimbot
Amasheke abonakalayo angasetshenziswa ukuphoqa i-aimbot ye-DayZ ukuthi idubule okuqondiwe okungabonakala, futhi igweme ukukhiya ezitheni ezisendaweni ezisolisayo.
Ukuthola kabusha kuyinkinga ku-DayZ, ngoba kuzophoqa abadlali ukuthi balungise ngenkathi bedubula. Isuse ngokuphelele usebenzisa i-Recoil Compensator yethu!
Isici Sesixwayiso sizokwazisa abasebenzisi be-Gamepron lapho isitha sisondele kakhulu, noma noma ngabe kuhloswe nge-avatar yabasebenzisi.
Imodi ye-DayZ super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Ukuwa kwe-Fall ngeke kusakwazi ukulawula umphumela wemidlalo yakho, njengoba ungavumela i-Super Jump Mode futhi ukhubaze ukulimala kokuwa ngokuphelele.
IDayZ ngumdlalo ozoklomelisa umsebenzisi ohamba phambili cishe ngaso sonke isikhathi. Ukusebenzisa i-hack yethu ye-DayZ kuzovula amandla akho weqiniso, njengoba nabadlali abangochwepheshe bazozibuza ukuthi uyakwazi kanjani ukubashaya. Nge-DayZ Aimbot yethu, isibhamu sakho sizobulala ngaso sonke isikhathi, ngenkathi i-ESP / Wallhack ikugcina ukwaziswa. Yenza okulungile futhi uthenge ukufinyelela ku-hack yethu ye-DayZ namuhla.
IDayZ ESP neWallhack
Amanye ama-DayZ Hacks nokukhohlisa
Ama-hacks nama-cheats adume kakhulu azokusiza ukuthi uwine ukufana okuningi, ngoba ukuthola impumelelo kulo mdlalo kuhlobene nezinga lakho lekhono ingxenye enkulu. IDayZ ingenye yemidlalo ethandwa kakhulu yempi eyake yakhishwa, futhi yize yakhishwa eminyakeni embalwa eyedlule, ihlala ingenye yezinketho ezithandwa kakhulu laphaya. Lapho ufuna ukujabulela isipiliyoni sakho sempi, ukusebenzisa i-DayZ hack yethu kuyisixazululo esihle kunazo zonke - awudingi ukukhathazeka ngokuqoqa izinsiza nokuphanga ezindaweni ezilungile, njengoba ithuluzi lizokunakekela lokho.
Ungasebenzisa izici ezifakwe ngaphakathi kukhukhumale wethu odumile we-DayZ ukuthola inzuzo kunoma yisiphi isimo, akunandaba ukuthi umdlalo ukuxabanisa nobani. Ngenkathi abanye abadlali bezothembela ethubeni, uzongena emidlalweni yakho ye-DayZ wazi ukuthi i-win isendleleni.
I-aimbot yethu ye-DayZ yakhiwe kusuka phansi kuya phezulu ukufaka zonke izici eziwusizo kakhulu, njenge-Bone Prioritization kanye nezinye izinketho ezingalungiswa. Awudingi izikhali ezihamba phambili emdlalweni lapho ukwazi ukushaya ilitshe ezindaweni ezibulalayo ngazo zonke izinhlamvu, yingakho abasebenzisi bengeke balinge ukucabanga ukusebenzisa noma iyiphi enye i-DayZ hack. Ngeke silokothe ​​sivumele abasebenzisi bethu babhekane ne-aituot ye-lackluster, ngoba leyo yingxenye ebaluleke kakhulu yaleli thuluzi! Zuza kuzo zonke izici ezimangalisayo esikwazile ukulingana ne-stellar DayZ aimbot yethu namhlanje ngokuthenga ukhiye womkhiqizo!
Ukulungisa izilungiselelo zakho kwenziwa kube lula ngemenyu engaphakathi kwegeyimu, eyenzelwe ukuvumela abasebenzisi abavela ku-Gamepron ukulungisa ama-hacks abo endizeni. Awusadingi ukuba nezilungiselelo ezifanele ngaphambi kokuvula umdlalo wakho, noma kufanele uvale uhlelo lokusebenza ukushintshela izinto phezulu - ungathembela kwimenyu engaphakathi komdlalo ukusingatha zonke izidingo zakho zokuguquguqula.
I-ESP neWallhacks kufanele empini yama-royale games, yingakho ukusebenzisa i-hack yethu ye-DayZ kuzokusiza ngaphezu kwezinye izinketho eziningi. Ngenkathi cishe yonke inkohliso ye-DayZ izoba nohlobo oluthile lwe-ESP ezosebenza nayo, sinezinketho ezahlukahlukene eziningi ezizokwenza ukunqoba kungagwemeki. Abanye abadlali bazobe bebhekene nenqwaba yamaZombi, izikhali ezimbi, nabalingani beqembu abangazi ukuthi kwenzekani; ngokujabulisayo, ukusebenzisa i-Gamepron kuzokuvumela ukukugwema lokho. Sebenzisa isici se-ESP kuzodalula bobabili abadlali nezinto eziwusizo, kanye nokunye okuningi okuguqukayo ukukugcina unolwazi.
Ama-Wallhacks akwazisa ukuthi izitha zitholakala kuphi ngaphambi kokuya endaweni, okusho ukuthi akudingeki ungene ungaboni. Thola izikhali ezihamba phambili usebenzisa i-Item ESP, noma funda nje kabanzi mayelana nezitha zakho ngesici se-Player Information ESP!
Isici seFootprint sitholakala kuphela eGamepron, futhi sizovumela abadlali bethu beDayZ bachume cishe ngokushesha (ngenxa yokuthi kungasebenza kanjani esimeni esifanele). Imephu ye-DayZ inkulu impela futhi uthola ukuthi izitha zicashe kuphi kungaba yinkohliso, kepha ukusebenzisa konke ukukopela kwethu kwe-DayZ (kufaka phakathi isici seFootprint) kuzodalula noma ngubani oseduze. Abasebenzisi banganika amandla isici se-Footprint futhi babone ukuthi izitha ziya kuphi ngokulandela ngemuva kwazo, njengoba kuzoba nochungechunge lwezinyathelo ezizokuholela endaweni yazo. Ukuzingela isitha sakho kuvele kwaba lula kakhulu! Awusadingeki ukubhekana ngqo nezitha zakho, ngoba isici seFootprint sizokuvumela ucashe emthunzini uze ulungele ukuteleka.
Uma kufika isikhathi sokulwa, ungakwazi futhi ukunika amandla ukulimala okuphezulu ukubulala abaphikisi bakho ngokushesha. Ibanga lisetshenziselwa ukubona ukuthi usondela kangakanani ezitheni!
Abadlali bazobhekisa kuphela izingxenye eziyingozi kakhulu zezinhloso zabo lapho Ukulimala Okuphezulu kunikwe amandla, kukuvumela ukuthi uchithe isikhathi esincane ulwa nesikhathi esithe xaxa sokuwina! Ibanga lingasetshenziswa ukubona ukuthi usondele kangakanani kulitshe ngenkathi usebenzisa i-Footprint, kepha kuthiwani ngezinye izici ezifakiwe ngaphakathi? Ukuthandwa kwesici seRadar nokususwa nakho kukhona ngaphakathi kwalokhu kukopela, okunika abadlali ithuba lokususa eminye imisindo ecasulayo yeDayZ. Intuthu, ukubuyela emuva, ukuthintitha, nezinye izinto eziningi kungasuswa lapho ukhetha ukugenca nathi eGamepron!
Ukuphepha kwamathuluzi ethu kuyinto enkulu okufanele uyicabangele futhi, ngoba iningi labanye abahlinzeki abanendaba nemizamo yabo yokulwa nokukopela njengoba kufanele. I-Gamepron ihlale izinikele ekugcineni umsebenzisi ephephile, noma ngabe bafuna ukukhohlisa ini! Hlala uphephile futhi usebenzise kuphela ama-DayZ hacks athembeke kakhulu, atholakala lapha eGamepron.
IDayZ Hacks Imibuzo
Kungani ama-DayZ Hacks ethu
Ama-hacks ethu we-DayZ awakwazi ukushaywa, futhi kungenxa yokuthi kade sithuthukisa futhi sisebenzisana nabathuthukisi bekhwalithi ephezulu isikhashana. Uma ufuna ukubona imiphumela ngenkathi usebenzisa ama-DayZ hacks khona manjalo, lawo ma-hacks wamahhala futhi ashibhile ngeke awenze umsebenzi wenziwe. Ukukopela kwesokudla bese usebenza neGamepron, asisoze sakudumaza.
Kungani iDayZ Aimbot yethu
Sebenzisa i-aimbot yethu ye-DayZ ukuthola inzuzo enkulu ngaphezu kwezitha zakho, njengoba ungeke uphinde uphuthe. Abanye abadlali bazosala basebenzise ikhono labo ukuze baqhubekele phambili, kepha ungavele unike amandla i-DayZ aimbot yethu futhi ukhiphe izitha zakho ngokuchofoza okukodwa kwegundane. Ungashayi uzungeze ihlathi futhi ubulale ngokuxhamazela usebenzisa i-Gamepron.
Kungani iDayZ ESP yethu
I-ESP yethu (i-Extra Sensory Perception) inikeza abasebenzisi ukufinyelela kuzinketho zendlela eziningi kunanoma iyiphi enye i-DayZ hack kuwebhu njengamanje. Ngenkathi ezinye izindawo zizokuvumela ubone amathambo omdlali futhi akukho okunye, i-Gamepron inikeza umsebenzisi okuningi kakhulu uma kukhulunywa ngokukhethwa kwe-ESP. Kungani kufanele uxazulule iDayZ ESP?
Kungani iDayZ Wallhack yethu
Ukudumazeka kuwumuzwa ongaguquguquki lapho usebenzisa ama-wallhacks athengwe kusuka kwenye indawo ngaphandle kwe-Gamepron. Ngeke nje kuphela ukuthi i-DayZ wallhack yethu ikuvumele ubone izitha kude (nangezindawo eziqinile / ezi-opaque), kepha ungabona nezinto nokunye ngaphezulu kwalokho. Uma ulwela ukuphanga izikhali ezinhle kakhulu emdlalweni ngokungaguquguquki, i-Item ESP yethu ne-DayZ wallhack izokusiza.
Kungani iDayZ NoRecoil yethu
Ukubuyiselwa emuva kungaba umehluko phakathi kokunqoba impi nokunqunyulwa kwakho kokugijima. I-Recoil ayifanele ukukusho ukuthi uwudlala kanjani umdlalo, yingakho sisebenzise isici sokususa ngokuphelele esivumela abasebenzisi ukuthi basikhiphe ngokuphelele. Kulungile, ungasusa ukubuyela emuva nge-hack yethu ye-DayZ, unikeze abasebenzisi isibhamu esinembe kakhulu. Yilokho esikwenzayo eGamepron!
Ungalanda kanjani ama-DayZ hacks amahle kakhulu?
Ungalanda konke okuhle kakhulu kwe-DayZ hacks lapha eGamepron, konke okumele ukwenze ukuzithengela ukhiye womkhiqizo. Sihlehlise inqubo yokulanda nokufaka ukuze sigcine abasebenzisi bethu bephilile, ikakhulukazi labo abangakaze badlule kule nqubo ngaphambili. Thola ukufinyelela namuhla bese ulanda ama-DayZ cheats amahle kakhulu atholakala ku-inthanethi! Hlala uphephile futhi ukhohlise nathi lapha eGamepron.
Kungani ama-DayZ hacks wakho abiza kakhulu kunamanye?
Amanani ethu akhombisa insizakalo esiyinikezayo, ngoba lokhu akuyona nje umhlinzeki we-hack oshibhile! I-Gamepron inikezelwe kuma-cheats asezingeni eliphakeme anezici ongeke uzithole kwenye indawo. Ukuphepha kwethu nakho akunakuqhathaniswa, njengoba sigcina abasebenzisi bephephile ngokunikela ngama-100% cheats angatholakali ngakho konke ukukhishwa - ukuqhekeka kwethu kwe-DayZ bekungeke kwehluke! Kukhona nenani elilinganiselwe lama-slots atholakalayo nganoma yisiphi isikhathi esithile.
Khetha umkhawulo wakho wesikhathi ngokuya ngezidingo zakho! Sinikeza imikhawulo yesikhathi okufanele ilingane cishe nanoma ngubani, inikeze abasebenzisi be-Gamepron ukuguquguquka okuphelele ngaphezu kwesipiliyoni sabo. Ungakhetha ukuthenga ukhiye womkhiqizo wosuku olungu-1, iviki elingu-1, noma inyanga engu-1 kithi e-Gamepron. Abanye abahlinzeki be-hack bazokuphoqa ukuthi uzibophezele isikhathi eside, kepha asifuni ukuphoqa abasebenzisi ukuthi benze noma yini.
Awesome DayZ Hack Izici